Kambodza: Niteraka Resabe Ny Andron’ny Mpifankatia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Janoary 2018 6:43 GMT
Vakio amin'ny teny ភាសាខ្មែរ, English
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Febroary 2010)
Tranga iray izay nipoitra vao haingana tao Kambodza ny fankalazàna ny ny Andron'ny Mpifankatia. Vao folo taona monja izao no nankalazàna ny Andron'ny Mpifankatia tao amin'ny firenena. Mbola mijanona ho resabe ifamaliana ny famaritana sy ny fanaovana azy na dia efa mibahan-toerana eo amin'ny tanora ankehitriny aza ny lazan'ny Andron'ny Mpifankatia. Misintona lakolosy fanairana izy ireo indrindra amin'ny fanao tsy izy mifandraika amin'ity fotoana iraisan'ny rehetra ity.
Mpanoratra maro no malaheo hoe diso ny fandraisana ny famaritana ny Andron'ny Mpifankatia. Hoy i Chhay Sophal, ao amin'ny lahatsorany ” ប្រយ័ត្ន​ទិវា វ៉ាឡិនថាញដេ ក្លាយ​ជា​ទិវា​ស្នេហ៍កម្មជា​ទិវា​នៃ​ក្តី​ស្រឡាញ់” [ Mitandrema Amin'ny Andron'ny Mpifankatia Sao Lasa Sasakalina Mampalahelo), nanantitra ny fanovàna tsy am-piheverana nataon'ireo tanora ny famaritana ny Andron'ny Mpifankatia:
Lasa andro malaza eo amin'ireo tanora ao Kambodza ny Andron'ny Mpifankatia hatramin'ny taona 2000. Hafahafa fa tanora sasantsasany no mandika vilana ny Andron'ny Mpifankatia ho “Eve for Lovers” (Sasakalin'ny Mpifankatia) raha tokony ho “Eve for Love” (Sasakalina ho an'ny Fitiavana) izay miantefa amin'ny fitiavana ireo ray aman-dreny, havana sy namana amin'ny ankapobeny.
Nasongadin'i Sophal manokana ihany koa ireo voka-dratsin'ny fahadisoan-kevitra momba ny Andron'ny Mpifankatia. Ao anatin'izany ny fitondrantena tsy mendrika amin'ny fanaovana firaisana eo amin'ireo tanora mpifankatia, izay mandika ny kolontsaina ao Kambodza, indrindra fa ireo mpifankatia mbola tsy mpivady. Vokany hafa ihany koa ny fiantraikany ratsy eo amin'ny fahasalaman'ny taova fiterahan'ireo vehivavy tanora.
Na dia tsy iasantsika saina loatra aza ny momba ny fifankativan'ireo tanora, dia tena miantraika amintsika kosa ny momba ireo tanora vehivavy ho very hasina sy potika tanteraka noho ny fanariany ny maha-virijiny azy. Mbola ratsy noho izany, ny mety hahabevohoka azy ireo ary ny fihitaran'izany ho amin'ny fanalana zaza. Hitera-doza amin'ny fahasalaman'ny fiterahan'ny vehivavy io.
Mbola nanamafy hatrany i Sophal fa ireo tanora vehivavy no tena tratran'ny VIH/SIDA raha tsy mampiasa fimailo ilay olona nanao firaisana taminy. Mety ho lasibatry ny resaka horonantsary mamoafady ihany koa izy ireo izay mety hanimba tanteraka ny hoaviny sy hanala-baràka ny fianakaviany. Noho izany, mampitandrina ireo tovovavy i Sophal mba tsy ho tafalatsaka ao anatin'ny fandriky ny fitiavana mandritry ny Andron'ny Mpifankatia. Nanoso-kevitra ihany koa izy fa tsara kokoa raha eo anilan'ireo havan-tiany, ray aman-dreny, havana na namana no ankalazàn'ireo tanora ity fotoana ity amin'ny fomba madio.
aNifampizaràn'i Vutha Morn ireny fanamarihana ireny izay nanontany ny fifandraisan'ny maha izy azy ny kolontsaina sy ny fitandroana ny kolontsaina rehefa nanoratra tao anatin'ny sata Facebook-ny i Sidaroth Kong hoe “Ny Andron'ny Mpifankatia sy ny Kolontsaina Khmer Mahabe resaka” : Moa va ny fiaraha-matory amin'ny olon-tianao ihany no hany fomba tokana hampisehoana fa tia azy ianao?”
Araka ny fanadihadiana iray natao momba ny ” Ny Fitiavana sy ny Fifandraisna amin'ny Firaisana Ara-nofo: Traikefa sy Vinavinan'ireo Tanora Manana Fari-piainana Antonony Manoloana ny Fiavian'ny Andron'ny Mpifankatia tao Phnom Penh ny taona 2009, notontosain'i Soprach Tong, izay nanadihady tanora miisa 458 teo anelanelan'ny 15 ka hatramin'ny 24 taona, fa ny maro an'isa amin'izy ireo no tsy mahalala akory ny tena tantaran'ny Andron'ny Mpifankatia. Rehefa nanontaniana raha toa ireo tanora manana fari-piainana antonony ka mieritireritra ny tsy hanao na inona na inona afa-tsy firaisana amin'ny Andron'ny Mpifankatia, nahita i Soprach fa:
“Araka ireo vokatry ny fanadiahadiana, 12.4 isanjaton'ireo namaly no nilaza ho miandrandra fa afaka ny hanao firaisana amin'ny Andron'ny Mpifankatia, ary maherin'ny 14.3 isanjaton'ireo tanora efa manana olon-tiana no namaly fa miandrandra ny hanao firaisana amin'ny olon-tiany amin'io andro io ihany koa, ary mpifankatia vitsivitsy no mieritreritra ny tsy hampiasa fimailo. Mandritra izany, ampahatelony mahery amin'ireo tanora mifankatia (39.5%) nohadihadiana (n=38) no nanambara fa io no fotoana voalohany hanaovany firaisana ara-nofo. Ary ny roa ampahatelon'ireo (66.6%) tovolahy manana olon-tiana (n=25) no hanao tsindry na hanery ireo tovovavy miaraka aminy hanao firaisana amin'ny fampiasàna fitaovana maro, raha tsy manaiky ireto farany. Ary farafahakeliny, fito isanjaton'ireo tovolahy namaly fa mieritreritra ny hanao firaisana no hivelatra amin'ny fidirana ho anatinà Bauk [Vondrona mpanolana, tenin-jatovo iray azo rehefa misy tanora iray (na roa) miady varotra aminà mpivarotena iray, na mangataka ny fahatsoramponà vehivavy iray ary manomana toerana iray hanaovany firaisana ara-nofo. Avy eo alaina ilay vehivavy ho any amin'ny hotely na trano fivahinianana iray, izay efa misy tovolahy maromaro miandry na vao ho avy tsy ho ela] amin'ny Andron'ny Mpifankatia.
Tamin'ny alalan'io vokatra io, niantso fampitandremana ilay mpanoratra momba ny firaisana ara-nofo nifanekena, ny fahasalaman'ny taova fiterahana ary ny fandaharanasa momba ny VIH/SIDA izay miantefa mivantana amin'ireo tanora any amin'ny faritry ny renivohitra ao Kambodza.
Manoloana ity tranga efa tena mampitahotra ity, nanangana lahatsary fohy dimy minitra ny Ministeran'ny Raharaha Misahana ny Vehivavy ao Kambodza, mba hanabeazana ireo tanora momba ny “tena hevitry ny Andron'ny Mpifankatia” hahafahan'izy ireo maneho fitiavana amin'ny ankohonany aloha voalohany, manarak'izany ireo mpampianatra ary avy eo ireo namana. Voarain'ny maro an'isa amin'ireo mpianatra, mpampianatra ary bilaogera tsara tokoa ity lahatsary fanabeazana ity izay ikendrena mba hampitandremana ireo tanora ao Kambodza tsy hiroso amin'ny firaisana tsy mendrika.
22 ora izayEoropa Andrefana
Hotarihan'i Beijing ny ankizy mpianatra ao Hong Kong hahay ny fiarovam-pirenena